Khilaafkii Kenya iyo Soomaaliya:- Afar sababood Oo Markii Horeba Xidhiidhka Xumeeyay | Gaaroodi News
Khilaafkii Kenya iyo Soomaaliya:- Afar sababood Oo Markii Horeba Xidhiidhka Xumeeyay
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in ay dib usoo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Kenya, kaasoo hakad ku jiray muddo dhowr bilood ah.
Go’aankan ayaa lagu sheegay bayaan wadajir uga soo baxay labada dhinac oo uu warfidiyeenka u aqriyay wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaloiya.
Soomaaliya waxay xiriirka u jartay Kenya kaddib markii ay ka tabatay arrimo ay ku eedeysay Kenya.
Wuxuu tilmaamay inay jawaab rasmi ah ka soo saari doonaan warka Soomaaliya ay soo saartay “iyagoo maraya wadiiqooyinka ku haboon.”
Sannad ka hor, bishii November 2019, waxay labada madaxweyne ka heshiiyeen arrimo ay ka mid ahay duullimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi.
Safiirrada dib loogu yeertay maxay ka dhigan yihiin?
Qaar ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda ayaa ku doodaya in safiirrada dib ugu laabanaya caasimadaha labada dal ay astaan u tahay in labada dhinac ay qaab kale isku afgaran waayeen.
Prof Cabdi Ismaaciil Samatar oo BBC Somali la hadlayay ayaa sheegay: “Labada dowladood oo daris ah oo safiirrada isu soo celiya waxa ay tilmaamaysaa xiriirka diblumaasiyadeed oo meel adag galay, oo si kale la isku afgaran waayay, marka waxaan isleeyahay wax wayn ayaa la isku hayaa.”
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Kenya ay madaxweynaha Jubaland ku “cadaadinayso inuu fuliyo ajandaheeda siyaasadeed” taas oo ay ku sheegtay “carqaladaynta” heshiiskii siyaasadeed ee Muqdisho kal hore lagu gaaray ee doorashada Soomaaliya.
Khilaafka cusub wuxuu ka dhashay Juballand oo ay ka howlgalaan ciidamada Kenya
Prof Cabdi Ismaaciil Samatar oo aan eedahaas uga hadlay sida ay latahay ayaa sheegay: “Eedaymahaas la sheegayaa Kenya oo qura kuma saabsanee wadammo fara badan ayaa Soomaaliya soo faragelinaya, waxay u soo faragelinayaan in ay ka shaqeystaan si ay uga soo baxdo meeshaasi cidda ay iyagu rabaan.”
Wuxuu sheegay in hal qaab oo ay Soomaalida uga faraxalan karaan faragelinta wuxuu yiri: “Sida keli ah ee Soomaali ay isaga celin kartaa faragelintaas shisheeye ee doorashadeeda ama dalkeeda ku saabsan waxa weeye in la kasbado dadkaaga haddaad tahay dowladda Soomaalida.”
Saameynta arrintan ka dhalan karta maxay tahay?
Labadan dal ee dariska ah waxay wadaagaan dano muhiim ah iyadoo Kenya ay ku nool yihiin muwaadiniin badan oo Somaali ah kuwaas oo ka gaacsada amaba ku nool gudaha Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi.
Waxaa kaloo jira qaxooti boqollaal kun oo Soomaali ah oo ku nool xeryaha Dhaadhaab iyo Kakuma kuwaas oo ay dowladda Kenya gacan u fidisay ka dib dagaalkii sokeeye ee ka qarxay Soomaaliya sannadkii 1991
Haddaba tallaabadan ugu dambaysay maxay horseedi kartaa?
Waxaynu su’aashaas waydiinnay Prof Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku dooday in “wax badan ay arrintaas kharibi karto”.
“Laba waddan ma ahan kuwa kala maarmi kara, oo jaarku ma kala maarmo ama isjeclaada ama isnecbaada Ilaahay baa iskiin baday, lamana kala kuuri karayo,” ayuu u sheegay BBC News Somali